Unicode , Wiki , Egress ကျောင်းဆင်းပွဲ - Saturngod
Unicode , Wiki , Egress ကျောင်းဆင်းပွဲ
Posted on Updated December 19, 2008 by saturngod
ဒီနေ့ egress ကျောင်းဆင်းပွဲကို သွားခဲ့တယ်။ ၅ နာရီ အမှီသွားရပေမယ့် ကိုကျော်ထွန်း တို့ရောက်နေလို့ စည်သူလှမ်းခေါ်တာနဲ့ Mr.Brown ကို အရင်သွားလိုက်တာ။ ဟိုမှာ လူတွေ တော်တော်စုံနေတာပဲဗျ။ ကိုငွေထွန်း ကိုမျိုးမင်းထူး အပါအဝင် တီလေးတို့ပါ ရှိနေတော့ အားနာပါနာနဲ့ မပြန်ဖြစ်ဘူး။ Unicode အကြောင်း Wiki အကြောင်းတွေ တော်တော်လေး ပြောနေကြတာနဲ့ ပြီးကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ wiki ကိုတော့ သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အခုချိန်မှာ edu ကို အာရုံစိုက်နေရလို့ အားရင် edu ကို ပြီးအောင်ပဲ လုပ်ဖို့ စိတ်က ရှိနေတာလေ။ အဲ… ဒီနေ့ စကားပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာက Unicode 5.1 ကို သုံးသင့်ပြီလို့ အကုန်လုံးက အဆိုပြုသတ်မှတ်လိုက်တာပဲဗျ။ အကောင်းနဲ့ အဆိုးကတော့ ရှိနေတာပဲဗျ။ ကိုငွေထွန်းကတော့ Font Convertor ရှိတယ် နောက်ပြီး MySQL, MSSQL database တွေကိုပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ File တွေကို ပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး keyboard လက်ကွက်မပြောင်းဘူး။ လိုအပ်တဲ့ technical support ကိုပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်တန်းတော့ ကြီးများတဲ့ porject တွေမှာတော့ သုံးသင့်နေပြီလေ။ ဇော်ဂျီကလည်း ရှိနေအုံးမှာပဲ။ နောက်ပြီး ဝင်း တို့ CE တို့ကလည်း ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲလိုပဲ Unicode 5.1 ကတော့ သုံးသင့်တဲ့နေရာမှာ သုံးသင့်နေပြီ။ အခုအခါမှာ မကြာခင်မှာ rendering အတွက် installer တစ်ခု ထုတ်ပေးမယ်။ အရမ်းကောင်းပြီး အရမ်းလွယ်တဲ့ installer ပဲ။ အဲဒါလေး အသုံးပြုလိုက်ရင် Windows XP service pack ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ရတယ်လို့ ကိုငွေထွန်းကို ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ web ပေါ်မှာတော့ ဇော်ဂျီဖြစ်နေပေမယ့် application တွေ windows မှာ file folder name တွေကိုတော့ unicode နဲ့ ပေးသင့်နေပြီ။ web ပေါ်ကတော့ display အတွက်ကတော့ ဇော်ဂျီက အဆင်ပြေပါတယ်။ Unicode ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလည်း ပြောင်းလို့ရနေပြီလေ။ MySQL ကို ပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Blog တစ်ခုလုံးကိုလည်းပြောင်းဖို့က မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖတ်ရသူတွေအဆင်ပြေအောင်တော့ ဇော်ဂျီပဲ ကောင်းပါတယ်။ ရိုက်ရတာလည်း အကျင့်ပါနေပြီလေ။ ဘာပဲပြောပြော unicode 5.1 က ဗမာ တွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော် ဗမာလို့ပြောတာက တိုင်းရင်းသား စကားတွေအတွက် အခုမှ စပြီး လုပ်နေလို့ပါ။ ရှမ်း မွန် စတာတွေအတွက် Unicode လုပ်နေပြီလေ။ မြန်မာ အတွက်ကတော့ ပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ်။ –် နဲ့ –့ နေရာလေး လဲဖို့လေးပဲ ကျန်တော့တာပါ။
Wiki ကတော့ ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် Server ကိစ္စတွေ logo ကိစ္စတွေ အသုံးဝင်များလာအောင် လုပ်ဖို့ ကိစ္စတွေ ကျွန်တော် နားမလည်တဲ့ ကိစ္စပဲဆိုမလား စိတ်မဝင်စားတာပဲပြောမလား သေသေချာချာတော့ မသိလိုက်ဘူး။ နောက်ပြီး သွားမယ်လုပ်ထားတာက ၅ နာရီ။ တကယ် သွားဖြစ်တော့ ၇ နာရီလေ။ egress ကို အရောက်သွားခဲ့တယ်။ အဓိကတော့ နေယံဦးဆီက iso file တွေ လိုချင်လို့ပါ။ သူ့ မှာ Linux ISO file တော်တော်များများရှိတယ်။ 14 GB လောက်ရှိတယ်။ အဲဒါကို သွားသယ်တာ။ Ebook ကတော့ 1 GB လောက်ပဲနဲ့ တူတယ်။ ကျွန်တော် edu ပြီးတာနဲ့ နောက်ထပ်လုပ်မယ့် project တစ်ခုအတွက် သွားယူလိုက်တာပါ။ edu ကတော့ မကြာခင်မှာ ပြီးတော့မယ်။ mondays လောက်ဆို ပြန်စနိုင်တော့မယ်ထင်တယ်။ အခုတော့ တော်တော်လေး ပြီးနေပြီ။ portal ကတော့ မလုပ်ရသေးဘူး။ လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ကလေးအဖေ ကလည်း စိတ်က ကလေးစိတ်လေ ဟိဟိ။ လုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာရင်တော့ ထိန်းမရ နေ့မအိပ်ညမအိပ်။ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ကတော့ ပစ်ထားတာ။ ဒါကြောင့် portal က နည်းနည်းလေး နောက်ကျမယ်။ Portal မပါပဲ အရင် run ဖို့အစီစဉ်ရှိတယ်။ အဲ… egress ကိစ္စတောင် မရောက်တော့ဘူး။
ဒီတစ်ခေါက် ကျောင်းဆင်းပွဲက တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ။ သူတို့ ကိုယ်ပိုင် creation ကိုကောင်းစွာပြသွားတယ်။ ကပြသွားတဲ့ ဇာတ်လေးတွေကလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်။ သဘောလေးတွေကလည်း မိုက်တယ်။ ထိရောက်တယ်။ တော်တော်လေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာပါ။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ နောက်ဆုံးပိတ် idea လေးပဲ။ ဆရာ ဆရာမ ထိုင်ခုံတွေ အကုန်လုံးကို ဝိုင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အမှောင်ချလိုက်တယ်။ ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင် မီးစထွန်းပြီး ဘေးဘက်ကို မီးညှိညှိသွားပြီး တစ်ခန်းလုံး ဖယောင်းတိုင် အလင်းနဲ့ လင်းသွားတယ်။ မီးညှိပြီး လက်ဆင့်ကန်း နေချိန်မှာ သီချင်းတွေ တူတူဆိုတာ တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျ။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ သီချင်း သံစဉ်နဲ့ စာသားတွေပါ။ creation ပိုင်းတွေ တော်တော်လေးကောင်းမွန်တော့ တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုရှိပါလားဆိုတော့ သိတော့ ဂုဏ်ယူမိတယ်။
အော်… UCSY ကော… ဘယ်တော့ ကိုယ်ပိုင် creation တွေ ဖန်တီးနိုင်မလဲ.. ဘယ်တော့ ကိုယ်ပိုင် idea တွေ အကောင်ထည်ဖော်ခွင့်ရမလဲ…… ကျောင်းသားတွေ…. ဘယ်တော့ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ချက်တွေ ရလာမလဲ…. ကွန်မြူနစ်ဆန်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ပုံအောက်မှာ…………….
« Picasa For Ubuntu If you can’t make Deb »